တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက် တက်ခ်ချို ဟွန်ဆန်နှင့် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရုတ်အနေဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား၏ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုနှင့် ပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝများအား တတ်စွမ်းသမျှ ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့သည် ခိုင်မာသော အစဉ်အလာရှိပြီးသော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖြင့် နီးကပ်သည့် အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်ပယ်စုံတွင် နှစ်နိုင်ငံကြား လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးတက်မှု ရရှိနေကြောင်း လီကပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒက် တက်ခ်ချို ဟွန်ဆန်တို့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးနေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လျက်ရှိသည်မှာ ကြီးမားသော အရေးပါမှုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံက မှတ်ယူကြောင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသို့ လိုက်လျှောက်ရာ၌ ကမ္ဘောဒီးယားအား ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် အဆင့်မြင့်ဖလှယ်မှုများ ထိန်းသိမ်းရန် အပြန်အလှန် နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုမှာ အပြောင်းအလဲမရှိ ဆက်လက်ခိုင်မာရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း လီက ဆိုသည်။ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (Regional Comprehensive Economic Partnership) အစပြုခြင်းနှင့် တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (FTA) အား ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာများနှင့် ထပ်မံကိုက်ညီမှုရှိရန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး စသည်တို့၌ နက်ရှိုင်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အခွင့်အလမ်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံနှင့် ဒေသများထံ အကျိုးကျေးဇူးများ ပိုမိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်စေရန် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်း မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့အတူ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေ ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှ အရည်အသွေးရှိသော စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေ ပိုမိုတင်သွင်းရန် အသင့်ရှိပါတယ်” ဟု လီက ပြောခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာရှနှင့် ဥရောပကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေး (ASEM) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား လက်ခံကျင်းပခြင်းကို ပံ့ပိုးလျက်ရှိကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ ဒေသတွင်းဗိသုကာ၌ အာဆီယံ၏ဗဟိုပြုမှုကို အခိုင်အမာ ထောက်ခံကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများ၌ ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ အာဆီယံ ပါဝင်မှုကို ထောက်ခံကြောင်းနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် လာမည့်နှစ်တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူရာ၌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား ပံ့ပိုးလျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်ကလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ခက်ခဲသောကာလများ၌ အတူတကွ အခိုင်အမာ အမြဲတစေရပ်တည်ခဲ့ကြသော သံမဏိမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘောဒီးယား၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာသော ပံ့ပိုးမှုနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု ပံ့ပိုးခြင်းအတွက် ကမ္ဘောဒီးယားက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအပြင် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုများအပေါ် လွန်စွာကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဟွန်ဆန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် နယ်ပယ်စုံ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် သက်ရောက်မှုကို ကျော်လွှားရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှု ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု စသည်တို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အဆင့်သစ် မြှင့်တင်ရန် လျာထားသည့်အတိုင်း ကမ္ဘောဒီးယား-တရုတ် FTA အသက်ဝင်လာရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ASEAM ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာစေရေး တွန်းအားပေးရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိလည်း အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China, #Cambodia, #PM, #LiKeqiang, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #ကမ္ဘောဒီးယား, #ဝန်ကြီးချုပ်, #လီခဲ့ချန်, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
Source: Xinhua| 2021-11-15 21:51:33|Editor: huaxia
“China is ready to work with Cambodia to increase trade in agricultural products and import more quality agricultural products from Cambodia,” Li said, adding that China supports Cambodia in hosting the upcoming Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit to further promote practical cooperation between Asia and Europe.
China firmly supports ASEAN’s centrality in the regional architecture, supports ASEAN in playingabigger role in regional and international affairs, and supports Cambodia in assuming the rotating presidency of ASEAN next year to promote the greater development of China-ASEAN relations, the premier said.
Hun Sen said that Cambodia and China are iron friends who have always stood firmly together in difficult times. The Cambodian side thanked China for providing strong support and assistance for Cambodia’s economic and social development, and said China’s achievements in pandemic prevention and control, as well as economic recovery, were highly appreciated.
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi also attended the meeting. Enditem
1,2– Chinese Premier Li Keqiang meets with Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen via video link in Beijing, capital of China, Nov. 15, 2021. (Xinhua/Ding Haitao)
3- Chinese Premier Li Keqiang meets with Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen via video link in Beijing, capital of China, Nov. 15, 2021. (Xinhua/Liu Weibing)